Torchlite: Kushambadzira kweDhijitari neCollaborative Economy Solution | Martech Zone
Torchlite: Kushambadzira kweDhijitari neCollaborative Economy Solution
China, November 5, 2015 China, November 5, 2015 Douglas Karr
Parizvino, iwe ungangodaro wakasangana neiyi quote kubva Tom Goodwin, mukuru mutevedzeri wemutungamiri wezano uye hunyanzvi kuHavas Media:
Uber, kambani hombe yetekisi, haina mota. Facebook, muridzi wepasirese anozivikanwa kwazvo, haigadzire zvirimo. Alibaba, mutengesi anonyanya kukosha, haana hesera. Uye Airbnb, mupi wepasi rose wekugara, haana zvivakwa.
Iko ikozvino 17 mabhiriyoni emadhora makambani mune inonzi kudyidzana hupfumi. Makambani aya akawana budiriro huru kwete nekugadzira chigadzirwa chitsva, asi nekugadzirisa maitiro avo kune ayo anogadzira kukosha nekuenzanisa vanhu vanoda zvinhu nevanhu vane zvinhu zvekupa. Kana zvichinzwika zviri nyore, zvakanaka, ndizvozvo nekuti ndizvo. Dzimwe nguva hunyanzvi hunongoreva kubata izvo zviri pachena.
Kuna Susan Marshall, mushakabvu mushambadzi, zvakave pachena kuti urwu rudzi rwekufunga-kugadzira zvakabatana zvakakwana-hazvingangobatsiri muindastiri yekushambadzira, zvaizodiwa.
Vatengesi vakajaira kutaura kuti tekinoroji yakagadzirisa nzvimbo yekutamba; iro bhizinesi diki nepakati nepakati ikozvino rave nematurusi ekukwikwidza nemajuggernauts. Mukuita, hazvisi izvo zvakapusa. Kunyangwe zvishandiso zvekushambadzira zvemadhijitari zviri nani uye zviripo zvakanyanya kupfuura nakare kose, makambani achiri kuda nyanzvi dzinoziva kushandisa maturusi aya kuti dziwane mhedzisiro. Tasvika padanho rekushambadzira generalists risingachakwanise kufambirana neinogara ichichinja mamiriro edhijitari Zvinotora nyanzvi, uye kumabhizinesi mazhinji, iwo mazvikokota anogona kunge asingakwanise kuwana.
Kuti zvirinani kuenzanisa mabhizinesi ari kutsvaga hunyanzvi hwekutengesa nehunyanzvi hwavanoda, Marshall akagadzira Torchlite - yekudyidzana hupfumi mhinduro inopa chero bhizinesi kugona kuvaka rakasarudzika rekushambadzira timu. Munzira yayo yekurwisa-agency, Torchlite inopa mabhizimusi nzvimbo yekutsvaga pamusika inovagonesa kukanda netiweki yehunyanzvi hwekushambadzira kuronga nekuita mishandirapamwe yedhijitari.
Nyanzvi yega yega, kana Torchliter, inosarudzwa zvichibva pamabhizinesi chaiwo zvido. Kutarisa kutyaira yakawanda traffic kuwebhusaiti yako? Torchlite inokufananidza iwe neye SEO nyanzvi ine ruzivo muindastiri yako kuona yako saiti yakagadziridzwa uye vatengi vako vanogona kukuwana iwe.
Torchlite inopa mabhizinesi imwe nzira yekuhaya vamwe vashandi vepamba kana vekunze vamiririri. Enzanisa mitengo yavo neiyo nguva yeawa yeanoshanda kana mutengo wekuhaya mune-dzimba nyanzvi ($ 50,000 yemaneja enhau, $ 85,000 kumutengesi weemail, $ 65,000 yeSEO / Webhu nyanzvi), uye iwe unogona kuona kuti panogona sei mikana yezvemari.
Torchlite zvakare inoita kuti mabhizinesi agare aripo awo ekushambadzira tekinoroji stack. Kuve nekwaniso kumusika wese wevanyanzvi vane hunyanzvi vachishandisa zvese zvigadzirwa zvekushambadzira zvemadhijitari zvinoreva kuti mabhizinesi haafanire kubvarura uye kutsiva tekinoroji yavo iriko.
Mabhizinesi anoshandisa Torchlite zvakare ane sarudzo yeku batidza, svika or dzima chaiwo online ekushambadzira matekiniki kana zvirongwa chero nguva. Kana kushambadzira kweemail, semuenzaniso, kuchiratidza kuve kwakanakisa kwekutyaira shanduko nepo mamwe maitikisheni asingashande, mabhizimusi akasununguka kushandura tarisiro yavo uyezve kugovanisa zviwanikwa zvavo. Torchlite inogadzirisa iyi yese maitiro kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, zvichireva kuti varidzi vebhizinesi havafanirwe kunetseka nezve kuhaya, manejimendi kana kuburitsa kunze kwetarenda.
Kubatsira varidzi vebhizinesi kuteedzera izvo avo Torchliters vari kushanda pairi, Torchlite inopa mutengi wese maneja account akazvipira pamwe nekuwana kune online dashboard. Kubudikidza neTorchlite dashibhodhi, vatengi vanoonekwa zvizere kuona kufambira mberi, kutarisa mabasa akarongwa, kubvumidza zvemukati uye kutarisa kuti vaswedera sei kuzadzisa zvinangwa zvavo zvekushambadzira.
Kufarira kuyedza Torchlite?
Saina demo rekutanga kusunungurwa Torchlite chikuva nhasi!
Tags: kubatsiranamabasa ekushambadzirakushambadzira tekinorojichishamisotorchlitetorchliter